Esi gbanwee ngosipụta ngosi nke gam akporo na-enweghị mgbọrọgwụ | Gam akporosis
Taa, dịka m kwere gị nkwa kemgbe mbido afọ a 2017, achọrọ m itinye nlebara anya pụrụ iche na arịrịọ nke ndị na - agụ ya ma ọ bụ ya mere m ga - eji kuziere ha ịgbanwe gam akporo ngosi ákwà mgbochi enweghị Root.
Mgbanwe a ga-emezu anyị ga-enwe ike ịhọrọ isiokwu nke ákwà mgbochi ngosi na ụdị Lollipop, udi nke Marshmallow, udi nke Nougat ma ọ bụ ọbụna na ụdị nke ọnụ dị ka Samsung ma ọ bụ LG. M ga-akọwa usoro a niile site na vidiyo na mgbakwunye vidiyo m hapụrụ gị na mmalite nke post a, yana nke ahụ site na ịpị «Nọgidenụ na-agụ nke a post», ị ga-ahụ njikọ ụzọ ga-ebudata ngwa n'efu nke anyị ga-achọ iji nweta ya.
Ngwa ahụ anyị na-ekwu maka nke a anyị na-ekwu maka ya na nke ahụ bụ maka ya anyị nwere ike nweta ịgbanwe gam akporo ngosi ákwà mgbochi enweghị Root, bụ a kpam kpam free ngwa n'ihi na gam akporo na-aza aha Ọnọdụ Ihe Dị Notrịba Ama na anyị nwere ike ibudata ozugbo na Storelọ Ahịa Play site na njikọ njikọ m na-ahapụ na njedebe nke post a.
1 Gini ka ihe onodu putara ighota na-enye anyi?
2 Budata Ọnọdụ Ihe Nleba ama na n'efu na Playlọ Ahịa Google
3 Ngwa foto ngwa
Gini ka ihe onodu putara ighota na-enye anyi?
Ewezuga inwe ike ịgbanwe ákwà mgbochi gam akporo na-enweghị ịbụ ndị ọrụ mgbọrọgwụ, Ọnọdụ Ọnọdụ Ihe Odide na-enyekwa anyị ohere gbanwee isi-Up ificationsma Ọkwa yana gbanwee agba nke ngosi anatara dika ngwa.
Ọ bụrụ na ndị a bụ ndị na-ama ole na ole functionalities, Ihe Ọnọdụ pụtara ìhè na- na-egosi anyị dum ificationsma Ọkwa, nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị anata ozi Gmail, ewezuga naanị ike ịhụ onye zitere ya, isiokwu ahụ na obere wepụ nke ọdịnaya nke ozi ahụ, yana Ihe Ọnọdụ Ihe Nleba anya anyị ga-enwe ike ịgụ ozi niile na-enweghị tinye ngwa ahụ ekwuru, na nke a Gmail.
Ọnọdụ ihe ama ama na-enye anyị, n'ime ntọala nhazi nke ngwa ahụ, akụkụ ndị na-atọ ụtọ dị ka ndị m ga-edepụta n'okpuru:
Malite: Nhọrọ ebe anyị na-ahụ isiokwu ngalaba nke ngosi mmanya mgbe ọ na-apịaji, ndepụta nke ngwa ịgbanwe agba nke ngosi, agba selector na enyemaka na banyere ngwa.
Hazie. N'ime nhọrọ a, anyị na-ahụ akụkụ dị mma dịka ohere nke ịmegharị ngosi ngosi yana mgbanwe nke agba, igosi ma ọ bụ zoo pasent batrị, na-etinye elekere na ọkwa ngosi, na-eji ọkwa ngosi ọhụụ ma ọ bụ na anyị na-egosi akara ngosi gbara ọchịchịrị. anyị nọ n'ụlọ.
Ogwe ngosi: Nhọrọ iji rụọ ọrụ ngosi ngosi, animation Snowfall, Nhọrọ nke isiokwu panel n'etiti Lollipop, Marshmallow, Android N na T, na-eme ka ogwe ahụ dị na nhọrọ iji hazie ihe oyiyi.
Welie isi elu: Nhọrọ iji rụọ ọrụ Isi, Uwe-Up style na ọchịchịrị ma ọ bụ ọnọdụ ọkụ, Nhọrọ iji tinye ọkwa ahụ n'elu ogwe ngosi ahụ, dị n'okpuru ogwe ngosi ma ọ bụ na ala ihuenyo ahụ.
Ndabere & weghachi.
Budata Ọnọdụ Ihe Nleba ama na n'efu na Playlọ Ahịa Google
Ihe Ọnọdụ Ogwe
Ngwa foto ngwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Esi gbanwee ngosipụta ngosi nke gam akporo na-enweghị mgbọrọgwụ